I-Loft - I-Airbnb
Génos, Occitanie, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Ooliivia
U-Ooliivia uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Itholakala amakhilomitha angu-7 ukusuka endaweni yokushushuluza e-VAL LOURON, futhi amakhilomitha angu-11 kuphela ukusuka endaweni yokushushuluza e-PEYRAGUDES, i-Loft izuza ngendawo enenhlanhla enkabeni ye-Louron Valley.
Isikhungo se-BALNEA Thermo-Ludique, indawo yokuqala yokuphumuza amanzi ashisayo e-French Pyrenees, iyikhilomitha elingu-1 kuphela ukusuka endaweni oyiqashile.
I-Loft iyifulethi elisesitezi sokuqala sengobo endala elungiswe ngokuphelele, enikezelwe imindeni enezingane, imibhangqwana yabo bonke ubudala nabathandi bezintaba.
Ingadi yayo engu-500M2 ikuvumela ukuthi uhlomule endaweni yokupaka mahhala.
Kusukela yayo 20 m2 ithala, ungakwazi ukucabanga "esigodlweni" edolobheni GENOS, kanye nokufinyelela (amamitha esingaphansi 300) ukuze echibini umnikelo emisebenzini yayo ehlukahlukene (kuye ngokuthi inkathi: isinyathelo isikebhe / gwedla / paraglider / zezingane imidlalo / njll ...).
I-Loft kufaka zinakho ekhishini / endaweni udla: lokungeniswa hob esiqhingini emaphakathi ukujabulela isikhashana conviviality nabangani / kuhhavini / microwave / esiqandisini - efrijini / ubhiya umshini (Krups) / ikhofi umenzi futhi umshini Nespresso / Kettle / Umshini wokuwasha izitsha / into yokucocobalisa / umshini we-raclette / zonke izitsha zokupheka.
A lounge endaweni elikuvumela ukuba uphumule futhi abe nesikhathi obuhle pellet yayo isitofu (enikeziwe), usofa yayo, futhi eliphezulu yayo ithelevishini ngogodo umsindo (Netflix enikeziwe mahhala), Wi-Fi internet.
Igumbi lokugezela elineshawa yokuhamba (umshini wokomisa izinwele namathawula unikezwa).
Amakamelo okulala angu-2 anombhede okabili onomatilasi ongu-160X200cm onethezekile.
I-Mezzanine eyi-1 ifinyeleleka kusuka kuladi lokugaya, iguqulelwe igumbi lokulala labantu ababili: umatilasi we-140X190cm.
I-Loft ifaka nesihlalo esingaphansi: umshini wokuwasha / indawo yokomisa / indawo yokugcina impahla ye-ski namabhuzu.
Njengoba lokhu kuyindawo yokuhlala "entsha", kunconywa ukuyinakekela. Uzocelwa ukuthi ubuyisele ifulethi lisesimweni esifanayo nangesikhathi ufika. Idiphozithi engu-30% yenani eliphelele ingase idonswe nganoma yikuphi ukucekelwa phansi.
Indawo yokuhlala enefenisha ihlukaniswe izinkanyezi ezi-4 yi-Heart of the Pyrenees Tourist Office.
Ngizoba khona lapho ufika nalapho uhamba kodwa futhi kukho konke ukuhlala kwakho ukuze uthole noma yiluphi ulwazi.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$4599.
Hlola ezinye izinketho ezise- Génos namaphethelo